गायिका इन्दिरा जोशी २ वर्षदेखि प्रेममा ! फेसबुकमा गरिन् यस्तो खुलासा | नेपालन्युज
गायिका इन्दिरा जोशी २ वर्षदेखि प्रेममा ! फेसबुकमा गरिन् यस्तो खुलासा
नेपालकी शकिरा नामले चिनिने गायिका ईन्दिरा जोशीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पृष्ठमा एउटा पुरुष र महिलाले हात समातेको फोटो पोष्ट गरेकी छिन। त्यो फोटोमा अनुहार देखाईएको छैन। तर महिलाको औंलामा ‌औंठी लगाएको देखिन्छ। उनले फोटो मुनि लेखेकी छिन, ‘उसले भन्यो म तिम्रो तारा हुँ तथा तिमी मेरी चन्द्रमा हौ। ’
उनले त्यो ‌औंठि प्रतिबद्धताको भएको उल्लेख गरेकी छिन । उनले २ वर्षदेखिको साथ आगामी कयौं वर्ष अन्तिम सास रहेसम्म ‌रहिरहने कुरा उल्लेख गरेकी छिन।
गायिका जोशीको पोष्टबाट उनि बिगत २ वर्षदेखि कसैको प्रेममा रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति को हो भनि त्यँहा उल्लेख गरिएको छैन।
पछिल्ला केही वर्षदेखि ईन्दिरा जोशी चर्चित नेपाली गायिकाहरुको पङ्तिमा अगाडि देखिन्छिन। झन नेपाल आईडलको निर्णायकको जिम्मेवारी पाएदेखि उनको कद अझै बढदै गएको हो। संगीतकार न्ह्यु बज्राचार्यको डोरेमी संगीत पाठशालामा संगीत सिकेकी उनले कालान्तर न्ह्यु बज्राचार्य संगै नेपाल आईडलको निर्णायक बन्ने अवसर पाउनु उनका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । जसको जिम्मेवारी उनले दर्शकहरुको प्रिय प्राय बनेर निभाएको पाईन्छ। अग्लो व्यक्तित्व, सुन्दर अनुहारका साथै गायकीमा पनि उनको क्षमता कम आंक्न मिल्दैन। हिजोको दिनमा नेपालमा रेडियो मात्र सन्चार माध्यम हुँदा गाउनेको अनुहार देखिदैंनथ्यो। तर आज स्वर मात्र राम्रो भएर हुँदैन गायक गायिकाको ब्यक्तित्वले पनि उचित प्रदर्शनकालागि योगदान गर्ने गर्दछ। यसैगरी उनमा पाश्चात्य संगीतको अनुभव पनि रहेको छ। यस सन्दर्भमा ईन्दिरा जोशी स्टेजमा उत्रदा मन नपाउने दर्शकहरु प्राय हुँदैनन। बिगतमा शुक्मित गुरुङ स्टेजमा गाउन जाँदा मानिसहरु लठ्ठ परे जस्तै आज ईन्दिरा जोशीको ब्यक्तित्वका साथै हाउ भाउले उनले गाउने गरेका गीत अझ जीवन्त बन्ने गरेका छन।
नेपालमा अत्यधिक रुपमा चलेको अलगधारको चलचित्र लुटमा उत्रेको चोली बोलको आईटम गीत गाउने अवसर पाएकी ईन्दिराले कयौं लोकप्रिय गीत गाएकी छिन। चौबन्दी चोली अनि रातो घांघर लगायत अनगिन्ती चल्ती गीतकी गायिका ईन्दिराले नेपाली तारा सांगितिक प्रतिस्पर्धामा पाँचौ स्थान ल्याएर नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा स्वर्णीय ढोका उघारेकी थिईन।
स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेकि गायिका ईन्दिरा जोशीका नयाँ नयाँ गीतहरुको अपेक्षा नेपाली संगीतप्रेमीहरुले गरेका छन। कोरोना भाईरसको संक्रमण कम हुँदै गएको अवस्थामा अब छिट्टै नेपाली रंगमन्चहरुमा साँगीतिक कार्यक्रमहरु फेरि सुरु हुनेछन तथा नेपाली दर्शकहरुले स्वरतथा ब्यक्तित्वकि धनी ईन्दिरा जोशी जस्ता गायिकालाई पुन भेटन पाउनेछन।
बेलायतमा राजा महेन्द्रको अन्तर्वार्ता लिने नेपाली
श्रीदेवी, बलिउडमा एक करोड पारिश्रमिक लिने पहिलो अभिनेत्री थिइन्
बिग बोसको उपाधि रुबिना दिलेकलाई, १४ लाख लिएर स्पर्धाबाट बाहिरिइन् राखी